Baolina kitra- Amboaran'ny KAF :: Manana tombon’isa roa harovana any Maraoka ny Fosa Juniors • AoRaha
Baolina kitra- Amboaran’ny KAF Manana tombon’isa roa harovana any Maraoka ny Fosa Juniors
Hafaliana sy horakoraka no nan­draisan’ireo mpijery baolina teny amin’ny kianja Vontovorona ny fahombiazan’ny Fosa Juniors FC, omaly, ao anatin’ny fika­tsahana ny tapakila farany mialoha ny hiakarana amin’ ny lalaom-bondrona amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaofederasiona afrikanan’ny baolina kitra (Kaf). Tafavoaka mpandresy teo anatrehan’ny klioba maraokanina RS Berkane tamin’ny isa 2 noho 0 izy ireo nandritra ny lalao mandroso. Manana baolina roa tafiditra izay harovany amin’ny lalao miverina, araka izany, ny tompondaka malagasy.
Fahombiazana iny vokatra iny noho ny nahafehezan’ ireo mpilalao malagasy ny lalao. Nahatafiditra baolina i Jean Yves vao folo minitra nilalaovana. Mbola nahita isa faharoa ihany koa ny Fosa Juniors tany amin’ny minitra fahasivifolo tamin’ny fanda­kan’i Baggio ny penalty.
Tsy nahita isa na dia iray aza ny RS Berkane na dia teo aza ny fandakana penalty azon’izy ireo, tany amin’ny minitra fahadimy amby enimpolo nilalaovana. Teo ihany koa i Fabrice, mpiandry tsa­tokazo, izay nampitondra ny fandresena ho an’ny Fosa Juniors FC noho ny nana­ka­nany baolina dimy noda­kan’ ireo mpilalao maraokana. Hakiviana ny an’ny ekipan’i Maraoka, indrindra ny an’ny mpanazatra azy ireo.
“Tamin’ny fizaràm-poto­ana faharoa vao tsara ny nataon’ny mpilalaonay. Kivy ihany aho anefa, indrindra nandritra ny dimy minitra farany. Maro ireo fotoana tokony nohararaotina nampi­dirana baolina saingy tsy nataon’izy ireo”, hoy i Tarik Sektioui, mpanazatra ny RS Berkane.
Hotanterahina amin’ny alahady ho avy izao ny lalao miverina any Maraoka. Nilaza ny mpanazatra malagasy fa “hiaro an’izay tombony izay ny Fosa Juniors FC. Manana moraly tsara izahay hiatrika ny lalao”, araka ny fana-zavan-dRasoanaivo Titi, mpanazatra ny Fosa Juniors FC”.
Nahita lesoka kely ihany anefa ny mpanazatra na teo aza ny fandresen’ny ekipany. Nanana finiavana te hanao zavatra tsara ireo mpilalaonay, hoy izy, ka nentim-po loatra. Nikoropaka avy hatrany vao nahatafiditra baolina tokana, ka hiezaka ny hanitsy izany amin’ny alahady.
Nanamafy kosa ny mpa­nazatra maraokana fa tsy ho mora no hiandry ny Malagasy amin’ny lalao miverina satria “manana fahatokisan-tena sy faharesen-dahatra izahay fa hahazo fandresena”, hoy izy, raha afaka herinandro.